बीमा Archives ~ Page 30 of 45 ~ Banking Khabar
अग्नि बीमा के हो ? कसरी गर्ने ? (सम्पूर्ण प्रक्रियासहित)
नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमा लेखहरूमध्ये अग्नि बीमा लेखको हिस्सा सबैभन्दा अधिक रहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले सम्पत्तिको बीमा गर्दा अग्नि बीमालाई पनि अनिवार्य गरेपछि अग्नि बीमालेख जारी हुने क्रम बढिरहेको छ । सम्भावित कुनै पनि दुर्घटनाबाट …
नेको इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयरले पायो ग्रेड ३ रेटिङ
नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गर्न लागेको शतप्रतिशत अर्थात १ बराबर १ अनुपातको हकप्रद सेयरलाई इक्रा नेपालले ग्रेड थ्री रेटिङ दिएको छ । यो रेटिङले कम्पनीको समग्र अवस्था औसत रहेको संकेत गर्छ । कम्पनीले एक सय रुपैया अंकित दरका ३२ करोड …
एलआईसी नेपालको आम्दानी घट्दा खर्च बढ्यो, तीन महिनामा ८५ लाख नाफा
लाईफ इन्स्योरेन्स कपोरेशन (एलआईसी) नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८५ लाख रुपैयाँँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४८ दशमलव १५ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा …
बीमा के हो ? किन गरिन्छ ? जान्नुस् बीमाको आवश्यकता र महत्व
बीमा भनेको आर्थिक नोक्सान हुँदा दिईने क्षतिपुर्तिको ग्यारेन्टी हो । बीमा गर्दा बिमित (बीमा गर्ने व्यक्ति) र बीमक (बीमा गरिदिने व्यक्ति) बीच सम्झौता हुन्छ । सोही सम्झौताका आधारबाट बीमा कम्पनिले नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन्छ । तपाई हामी सबै मानिस भोली अर्थात …
कञ्चनपूरका छ सय किसानले गराए बाली बीमा
जोखिम न्यूनीकरण गरी लगानी सुनिश्चित गर्नका लागि कञ्चनपुरका ६०० बढी किसानले बाली बीमा गराएका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरले भइरहेको नोक्सानी कम गर्न, जङ्गली जनावरले पुर्याउने हानी र अन्य आकस्मिक कारणले हुने नोक्सानीको जोखिम घटाउनका लागि यहाँका किसानले बाली बीमा …
प्रभु इन्स्योरेन्सले १७ प्रतिशत बोनसपछि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने
प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १७ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार सम्पन्न २१ औँ वार्षिक साधारणसभाले हाल कायम चुक्तापुँजीको १७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि २४ लाख १८ हजार २४ रुपैयाँ नगद लाभांश …
लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्सका सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर
लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १८.१८२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १८.१८२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.९६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो …
व्यवसायिक कृषि गर्दै हुनुहुन्छ ? बीमा गर्न नभुल्नुस्, अपनाउनुस् यी विधिहरु
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई २१.०५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक बर्ष १८ …
आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर दिँदै नेको इन्स्योरेन्स
नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गर्ने भएको हो । कम्पनीको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले उक्त निर्णय गरेको बताइएको छ …